မလိုချင်ဘူး…ဟဲ့…ပွိုင့်….ဒါပေမယ့်…….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မလိုချင်ဘူး…ဟဲ့…ပွိုင့်….ဒါပေမယ့်……..
- tharli kar
Posted by tharli kar on Jul 4, 2012 in Copy/Paste | 51 comments
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မူလသတ်မှတ်ထားသော နှုန်းထားများမှာ… လုပ်စား…အဲ….( ကြိုးစား) ၍ပင်မကိုက်လှ..။
manber စဝင် = (၄၀၀၀ိ/)ကျပ်
ဆောင်းပါး(သို့)တင်ချင်သလောက်တင် (တစ်ပုဒ်) = (၃၀ိ/)ကျပ်
comment တစ်ခါဝင် (“……… “ချလျှင်လည်းရသည်) = (၁၀ိ/)ကျပ်
(၁၀၀၀၀၀ိ/) ရဖို့………ဆောင်းပါးပေါင်း…..(၃၀၀၀)ပုဒ်လောက်တော့….ဖျစ်ညစ်ကာ ကစ်ရပေမည်။
လိုတော့မလိုချင်ပါ….။ အသို့ဆိုပေမင့် ကိုယ်ရေးထားသောစာကို ချီးမြှောက်မည်ဆိုတော့လည်း..ရချင်ပါသည်ပေါ့…။
ဒီကြားထဲ….ဆောင်းပါးတွေကို ခေါင်းကညစ်မထုတ်နိုင်…….တခြားနေရာသတင်းကို လှမ်းပြီးမချိတ်နိုင်ဖြစ်လို့
comment အနေနဲ့ ဝင်ကစ်ရင်လည်း……(၁၀၀ိ/) ရဖို့….သူများဆောင်းပါးတွေ…သတင်းတွေ..(၁၀) ခုမှာ…
“ဟုတ်ကဲ..မှတ်သွားပါတယ်” “ယုံဘူးဗျို့……..” “စွာလှချည်လား……..” “ကြိုးစားထားဗျို့”
“ေ-ွး……သူတောင်းစား..သွားသေ” “ဟိ…ဟိ….ဗျဲ…..” “တားတားက ဂျဂါးနပီဘူး…ထွင့်ယွှတ်ညော်….”
သူကြီး kai တို့လို…ဒေါ်အိတုံတို့လို…..လက်ဆော့တဲ့ကိုပေါက်တို့လို….ကိုဘုန်းကျော်တို့လို…
တကယ်တော့ ကိုယ်ရဲ့ခေါင်းထဲကညှစ်အားတွေနဲ့ ရင်ဘတ်ထဲက အန်ထုတ်ရမယ့် ဇီဝဇိုးငှက်သိုက်လို အံဘတ်တွေကို
ရောင်းတော့မစားချင်ပါဘူး…(မရလို့)။ ဒါပေမယ့်ဗျာ…..ဂေးဇးက်ရဲ့ ရွာအခြေအနေက အရမ်းကို လေဒီအင်ဂျန်းတဲ(လ်)မင်း
ဆိုင်မှာအင်တာသုံးခနဲ့ညီမျှတဲ့….ပွိုင့်အစီအစဉ်ကောင်းလေးများ ကို နိုင်ငံကောင်းစားရေး…..
About tharli kar
tharli kar has written 10 post in this Website..
View all posts by tharli kar →
ဟူးးးးးးးးးးအကို ဟစ်တိုင်ကလဲ အားလုံးကိုသိမ်းကျုံးဆော်ပလော်တီးနေပါရော့လား။ဂေဇက်
ရွာက ဆရာကြီးတွေဆီက ကျနော်တို့ ဆိုသင်ယူနေရတာ အများကြီးပါဗျာ။
tharli kar says:
ကျုပ်လဲ သင်ယူနေပါတယ်။ ဂေးဇက်မှာ ယူစရာတွေအများကြီးပါ…
ရေးချက်နဲ့ကလေးအတွက် ဆိုတာလေးကိုတော့ စိတ်ဝင်စားတယ် …… အခုဂေဇက်မှာရေးနေတာလေးတွေ မန့်နေတာလေးတွေက ဒီဇင်ဘာရောက်ရင် ပွိုင် ၁သိန်းရရခဲ့ရင် သမီးလေးမွေးနေ့မှာ လက်ဆောင်လေး ပေးချင်လို့ကြိုးစားနေပါတယ်ဆိုတာလေးပါ …….
ရှိရမယ်လေ…Khaing Khaing ရဲ့…။ အားတင်းထား…။
(ဂေးဇးက်ရဲ့ ရွာအခြေအနေက အရမ်းကို လေဒီအင်ဂျန်းတဲ(လ်)မင်း
စာရေးသူရဲ့ ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့ သဘောထားလေးကို အသိအမှတ်ပြု ဖတ်ရင်း အားပေးသွားပါတယ်…
Mon Kit လဲ…ဒါနပြုအုံးနော်….
ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး says:
ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး ကိုလည်း…ရှဲ…..ရှဲ…..(ကျေှးဇူးတင်ပါသည်)
King of Secrets (Bo Min) says:
အော်၊ သူကြီးဘက်ကလည်း ကိုယ်ချင်းစာကြည့်ဦးလေဗျာ။ ရေးတဲ့လူဦးရေက နည်းတာဟုတ်ဖူး၊ ထပ်တိုးပေးလိုက်ရင် သူကြီး မွဲ ဖို.ဘဲရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခု လူအသစ်တွေကို ၅၀၀၀ စပေးနေပြီလေ။ ကျွန်တော်ဆို စဖွင့်တုန်းက ၅၀၀၀ ရတာ။
” သူများမနိုင်မနင်းတွေကို….ရှင်းပေးမယ်ဟဲ့…” ဆိုတဲ့စိတ်က
(မဖားချင်သော်လည်း…ယားမိပါသည် kai သူကြီး)
သူပြောမှ ရေးမယ့် လက်တောင် တုံ့ခနဲ့ဆိုသလို ရပ်သွားပါရဲ့… တစ်နေ့ တစ်နေ့ ၁၀ ကျပ် ၁၅ ကျပ်ရဖို့ ကွန်နက်ရှင်ကို ထိုင်ရှိခိုးနေရတဲ့ကြားထဲမှာ ဒီလိုလေး ပေးမယ်ဆိုတော့လည်း မစားရ၀ခမန်းဆိုသလို မျှော်လင့်ချက် ရောင်နီတော့ သန်းလာတာပေါ့ရှင် ဟုတ်ဘူးလား
အောင်မလေး သာလိကာရဲ့ စွပ်စွပ်စွဲစွဲတော် …တခါလေးပဲ .. လုပ်စားမိပါတယ် ..ဟိုပုံနဲ့ လုပ်စားနေသတဲ့တဲ့ … ။ အပြောခံရတာနဲ့တန်အောင် .. ဖေ့စ်ဘွခ်တနေကုန်ဖွင့်ပြီး .. အချိုးမကျတဲ့ပုံတွေ တနေ့ပို့စ်တပုဒ်နှုန်းပြပြီး လုပ်စားပလိုက်ရမလား … ပြော .. ဟဲဟဲ
အဟိ ……… ၀င်ငွေကို ကြွားရလျှင် …. ဒီတစ်ခါရလျှင် နှစ်ခါရှိပြီ ကွ .. ခွိခွိ … မနာလိုဖစ်စမ်းဘာ ..ဖစ်စမ်းဘာ …
အရင်က ပို့စ်တပုဒ် သုံးရာရတယ် ..ကော့မန့် တစ်ခု ငါးဆယ်ရတယ်… မနာလို ဖစ်စမ်းဘာ ..ဖစ်စမ်းဘာ.. ဟိဟိ
ပစ်စလက်ခတ် မျက်ရည် says:
အဟောသိကံဖြစ်မယ့် ကျုပ်လက်ရှိပွိုင့် ၄၂၀၀၀ အတွက်
သဂျီးဆီက ပိုက်ဆံ ဒီတစ်သက်မရတော့လည်း ကလေးတွေ အမွေပေးခဲ့လို့ရတာပေါ့ …..
လူတစ်ရာ ၀ါးတစ်ရာ ရှိုတလို…
ရတာတော့ တစ်လုံး ပေးရတာ တစ်ရာ ရှိုပြီး နားလည်မိပါတယ်..
များများရားချင်ရင် များများအကြံအဖန်လုပ်တတ်ဖို့ လိုသပေါ့..
ပြောရင်းရှိုရင်း ရှငါးကျပ် ရားသွားပြန်ဘီ..
ပွိုင့်တွေကိုတော့ ကိုယ့်စည်းစိမ်ကြီးနဲ့ တွက်ပြီး ဒီပွိုင့်လောက်ကတော့ အရေးမလုပ်ပါဘူးလို့ ပြောတာဟာ
အလွန်မိုက်ရိုင်းတဲ့ စကားတွေဖြစ်တယ်လို့ သုံးသပ်ပါတယ် ( ဒါဂ ကိုယ့်ဘာသာ အဓိပ္ပါယ်ပြန်ဒါ )
ကိုယ်ရေးတဲ့စာတွေဟာ သိပ်တန်ဘိုးရှိတယ် လို့ထင်ရင် ရနိုင်တဲ့ဈေးကွက်ထဲကို ပို့ကြည့်ပေါ့
( ဂျာနယ်တွေ စာစောင်တွေ )
အမှန်ဆုံးပဲ ရှရာ ရှောင့်လန်တို
ခင်ဗျားလို ဆဲနေတတ်တဲ့သူလောက်တော့ ဘယ်သူက စာကောင်းတွေ ရေးတတ်ပါ့မလဲဗျ။ နောက်တာ မဟုတ်ဘူး။ အတည်ပြောတာ။
တစ်သိန်းကတော့ပြည့်မယ်မထင် ဒါပေမယ့်ဝါသနာတူလေးတွေ စာချစ်လေးအနုပညာချစ်လေးတွေ အများကြီး ဂေဇက်ထဲမှာရှိနေတော့ ပျော်သားသတင်းထူးလည်းကြားရတယ် မင်းသားမင်းသမီးတွေ ဘယ်လိုဝတ်စားထားတယ် ဘယ်လို ဘယ်သူနဲ့တွဲနေတယ်ဆိုတာကစသိရတယ် ဂေဇက်ရွာဒီထက်မက တိုးတက်ပါစေ။။။။
အဟိ.. အဆူလဲ ခံရတယ်ပြောဦးလေ စနိုးရဲ့ ။ စာရှည်ရှည် မရေးလို့ဆိုပြီး ။။ :grin:
သူကြီးဆီက ရဖို့နေနေသာသာ သူကြီးကိုတောင်ပြန်လှုနေရဦးမှာ ကိုသာလိကာ ။။ အာမီတွေ ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ခံနေရလို့ ဆိုဒ်လေး ပျက်မသွားအောင် သူကြီး ဘက်အပ်ဆာဗာဘိုးနဲ့ အခု ကွန်မန့် တစ်ခါပေး ၁၅ ကျပ်ကနေ ၅ ကျပ် ပြန်လျှော့မသွားရင်ဘဲ ကံကောင်း ..
ဆာဗာ တိုက်ခိုက်ခံရလို့ဆိုပြီး အားလုံး တစ်ကပြန်စမယ် ဆို ဒုက္ခ … :grin:
အဲလို ပွိုင့်ရယုံလေးတော့ တစ်ခါမှမရေးဘူးပါဘူးလို့ …. ဟီး…ဟီး မရေးဘူးဂျောင်းပြောပြဒါပါ….
နှင်းဆီ ငုံ says:
ငုံလည်း 10 လေးတော့ ယူသွားအုံးမှ … ဟိဟိ
ခင်ညား ဆိုလိုချက်တွေ ထိရောက်ပါပေ့
ဒါပေမဲ့ဂျာ ပြောချင်တာ ပြောပါ ကျုပ်ကို ဂေါင်းဇင်တပ်ပီး ဆွဲမထည့်ပါနဲ့
နောက်တချက်က ခင်ညားပြောတဲ့ ဘုရားဟော တရားတွေကိုဗျာ ကျုပ်ဖတ်ရင်းနဲ့ ကိလေသာကုန်ပီး တခုခု ရသွားအောင် ဘာရသ မြောက်မြောက် မြောက်တာ တခုခုနဲ့ ရေးပေးပါလားဂျာ
ကျုပ်လဲ အရက်သမား ဘ၀က ကျွတ်ချင်နေပီ…………
ကိုရဲစည် ရှင်ဆုပေးမယ်ဆိုတာ တရုတ်ငွေ ၅ထောင်လား ဟင်င်င်င်င်……
တရုတ်ငွေဆိုရင်တော့ တနေ့ ကို ၂ ပုဒ်နှုန်းနဲ့ပို့မယ် စိတ်ကူးတယ်
woo warr says:
အရင်က ပို့ စ်တစ်ခု=၃၀၀
ကဲ…ကဲ..ပြောနေတာကြာတယ်…ခုလက်ငင်းရတဲ့ မန့်ခ ၁၅ ကျပ်ပဲယူသွားတော့မယ်။
မလိုချင်ဘူး…ဟဲ့…ပွိုင့်… ဆိုလို့ လွှင့်ပစ်တယ်ထင်ပြီး လာကောက်တာ
ဆိုတော့ member က ၉၀၀၀ ကျော်၊ ပိုင့် တိုးပေးလိုက်လို့ .. ၁ သိန်း နီးလာလို့ ဆိုပါတော့ member အယောက် ၁၀၀ … အဲ .. နဲနဲ များသွားပြီ .. member 10 ယောက် ထား .. တပြိုင်တည်း နီးပါး (တစ်လ ကွာ နှစ်လ ကွာ) ပြည့်ပြီ ဆိုပါတော့ .. ကဲ …..
မှတ်ချက်။ ။ သူကြီး သည် ခွန်ဆာ မဟုတ်ပါ။
သူကြီးပါဆို ခွန်ဆာမဟုတ်တာ သေချာပါတယ်ဗျ …
ဆိုတော့ သူကြီး အခု လို လှူနေတဲ့အတွက်ကြောင့် ကုန်မသွားတဲ့အပြင် ..
နောက်ထပ် နောက်ထပ် တိုးပွား မှာ အသေချာမို့ …
ပွိုင့် များများ လှူနိုင်ပါစေလို့….
ခုတော့ သူကြီးလှူတဲ့ ပွိုင့်လေး ယူ သွားဘီ …
သာလိကာ ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ ပြောသွားလိုက်တာများ…….
ဆွဲသာဆွဲ မင်း ဂရုမစိုက်နဲ့ … ခင်မောင် ခင်မောင်
မြွေမသေ၊ တုတ်မကျိုးလေးတော့ “သာသာ့”ကို နားလည်းပေးပါနော်…။
ငုံလည်း 10 လေးတော့ ယူသွားအုံးမှ … ဟိဟိ………..=၁၀
စုစုပေါင်း = ၁၀၀
သဂျီး ကျုပ် အများကြီးရေးတာ….ပေး….၁၀၀ /
minma haw says:
အော်.. ပွိုင့်.ပွိုင့် စားရပြန်တော့လည်း မ၀
ပွိုင့် တွေက တစ်သိန်းမပြည့်မချင်း ပန်းချီကားထဲကမုန့်လိုဘဲ
မုန့်တော့မုန့် ဒါပေမဲ့ စားလို့မရဘူးလေ…
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လဲ မသေချာ ခေတ်ကာလ ကလဲ ဘာမှန်းမသိ…
kai on သမိုငျးမတှငျပမေယျ့ သမိုငျးဝငျနတေဲ့မိဖုရား (မွောကျနနျးစံမိဖုရားကွီး ရှငျသဲ)
manawphyulay on ပြန်လည်စည်ကားစေချင်…
manawphyulay on သမိုငျးမတှငျပမေယျ့ သမိုငျးဝငျနတေဲ့မိဖုရား (မွောကျနနျးစံမိဖုရားကွီး ရှငျသဲ)
manawphyulay on အလှတရားလား ။ အရညျအခငျြးလား။
Shar Thet Man (92276 Kyats )